Ihe osise na ntụpọ na mbọ
Mma na ike Nlekọta ahụ
Ọtụtụ ụmụ nwanyị nke oge a, na-eme nsị , na-ahọrọ nchapụta, dị mma, ngwọta dị mma. Ọhụụ ọhụrụ na usoro dị iche iche na-egosi ọtụtụ mgbe. Ụfọdụ n'ime ha dị mfe nghọta. Were, dịka ọmụmaatụ, foto nke ntụpọ na mbọ. Ha dị ịtụnanya. Mana nke kachasị mkpa bụ na ọ dịghị mkpa ịghọ ọkachamara ọkachamara iji ghọta ha. Naanị ịzụta dotz, fantasize, mepụta na ịtụnanya!
Foto dị mfe nke ntụpọ na mbọ
Mbụ ị ga-achọ ịghọta okwu ahụ. Ihe ntụpọ bụ obere ngwá ọrụ nke na-ele anya na anya abụọ na-acha obere bọọlụ na nsọtụ abụọ. Bọọlụ ndị ahụ bụ ihe na-agbanwe agbanwe ma nwee ike ịdị iche. Ị chọrọ ngwaọrụ a maka ịbịaru ntụpọ. N'ikwu okwu n'ụzọ doro anya, aha ngwá ahụ yiri okwu "ntụpọ" na Bekee.
Ihe osise na-adọrọ mmasị na mkpịsị aka ma ogologo. Ihe kachasị mfe bụ isi ihe. Ha nwere ike inwe otutu agba, dị iche iche na nha, tinye ya na ụfọdụ atụmatụ ma ọ bụ chaotically. Ikwesịrị otu ahụ bụ otu, ịkwesịrị ịdebe bọl ahụ mgbe niile. Ma ọ bụghị ya, isi nke ọ bụla ga-adị obere ma dị ntakịrị (nke, n'ụzọ, na-ejikarị ya eme ihe).
Ihe ntanetị nke na-abanye na ntu bụ njiri. A na-enweta ha, ma ọ bụrụ na ị ebute ụzọ ahụ, ma gbatịa ya ntakịrị. Naanị iji gbatịa ya dị mkpa ọ bụghị n'usoro n'usoro, ma na-etinye obere eriri. Ndị nwe obodo nwere ike ijikọta ibe ha, a ga-enwetakwa ihe osise ndị mbụ.
Tụkwasị na nke a, iji ntụpọ na mbọ, ị nwere ike ịdọrọ usoro ziri ezi. Na-edozi ma na-edozi ihe dị iche iche, ị nwere ike ịnweta ihe ịchọ mma mara mma, ụkpụrụ, ụkpụrụ. Na iji mee ihe niile zuru oke, ịkwesịrị ịgbasobe iwu ndị dị mfe:
Tupu ị na-eji ntụpọ ahụ, echere ka isi oyi akwa dọrọ.
Maka ịbịaru, ma ihe na-acha ma ọ bụ acrylic na- acha na mmiri dị mma.
Ọ bụ ezie na dotts ma dị ka pensụl, ịkwesịrị idebe ya n'akụkụ aka ya.
Ntugharị nke panda na mbọ ya site na ntụpọ
Na-acha ọcha lacquer, agba ọkara nke ntu ahụ wee buru nnukwu gburugburu.
Mgbe na-acha ọcha na-acha, tinye obere obere nke larịị ojii na foil, soak na oghere n'ime ya (a na-ajụ-sized obi ụtọ).
Site na cuticle na nsọtụ nke gburugburu, tinye ihe abụọ dị mkpa - ntị. Mgbe ahụ dọpụta ihe abụọ ọzọ dị ka etiti dị na etiti nke na-acha ọcha n'elu - anya.
Tinye ntụ ntụ ojii n'etiti etiti ntuhie ahụ.
Na obere obere bọl, tinye ebe ntụpọ abụọ na anya.
Ọbụna obere ụmụ akwụkwọ bọl.
Ogwe Ugwu Na-akpa Aka
Mkpụrụ ọgwụ maka ntachu
Ụkwụ na ahụ - akpata na ọgwụgwọ
Calf ụkwụ na-arịa ọrịa - ihe ị ga-eme?
Ụkwụ ụkwụ - ihe kpatara ya
Uhie uhie na ụkwụ
Esi mee ka mbọ dị ọcha?
Nchegharị maka mgbawa na ikiri ụkwụ
Lemọn maka mbọ
Ọhịa aka na-emechibido cellulite n'ụlọ
A na-agbaji mbọ dị na ụkwụ
Ngwa marinade maka shish kebab si anụ ezi
Janet Jackson gbara di ya alụkwaghịm ọnwa atọ mgbe a mụsịrị nwa ya nwoke
Chrissie Teigen na-akwa emo, na-eyiri ejiji na-egbutu ndị na-enweghị akwụkwọ
Ihe na-esi na akwukwo nri
Ndị na-agba ọsọ
Uwe ejiji nwanyi
Kedu esi esi esi anu ogwu na oven?
Nnukwu nke brik na osisi a kpara
Candy ugu swiiti - uzommeputa
Ihe ị na - enweghị ike inye - ihe ịrịba ama
Kedu ihe ị ga-agwa mmadụ?
Nri pancakes na yogot
Kedu ka mgbanwe dị ime dị?
Nri ihe ọṅụṅụ maka ntutu
Kleshchevina - na-eto eto site na osisi, mgbe a kụrụ na seedlings, ndị bụ isi iwu nke akuku
Jennifer Lopez na-ese foto na franchise maka W Magazine
Chinese kabeeji - calorie
Ego ole ka nwa ọhụrụ ga-ehi ụra?
Gini mere isi m ji agba?
Vanga na-agba izu maka ego na ọṅụ